I-LGD4033 powder emnyama (1165910-22-4) Abakhiqizi - Phcoker
I-LGD4033 powder emifushane (1165910-22-4)
Idatha yesayense esitholakalayo ku-LGD4033 powder empeleni ibonisa ubufakazi obuningi bokuthi siyi ......
SKU: 1165910-22-4 Isigaba: Uchungechunge lweSarm
I-LGD4033 powder emfushane (i-1165910-22-4) ividiyo
I-LGD4033 powder eyaziwa ngokuthi i-Ligandrol / anabolicum, iyisimo se-androgen receptor modulator (SARM) ekhethiwe yokuphenya ukuphathwa kwezimo ezinjengokubhujiswa kwemisipha nokuphefumula kwe-osteoporosis.
I-LGD4033 powder enomdlandla ithuthukiswe ukuze isebenzise umlingo wayo we-anabolic kumathisamu omzimba. Ngenye yezinhlobo ezintsha ze-SARM; ikhiqiza imiphumela efana ne-steroids kodwa ngaphandle kwemiphumela emibi kakhulu. Eqinisweni, yi-SARM enamandla kunawo wonke emakethe futhi yizindaba ezinhle uma ufuna ukuthola okunye okuzuzayo.
I-LGD4033 powder emifushane (1165910-22-4) Siziqu
Igama Product I-LGD4033 powder emifushane
Igama leKhemikhali 9-Chloro-2-ethyl-1-methyl-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-3H-pyrrolo(3,2-F)quinolin-7(6H)-one
CAS Inombolo 1165910-22-4
I-molecular Fi-ormula C14H12F6N2O
I-molecular Weziyisishiyagalombili I-338.253 g / mol
IMisa ye-Monoisotopic I-338.085 g / mol
Ukuxuba Pi-oint I-105-107 ° C
solubility Umswakama wamanzi: 0.00474 mg / mL
I-LGD4033 i-powder A elulaukuphikisana i-androgen receptor modulator (SARM) ekhethiwe yokuphenyisisa ukwelashwa kwezimo ezinjengobuhlungu be-muscle kanye ne-osteoporosis.
Umshwana omkhulu we-LGD4033 powder (1165910-22-4) Incazelo
I-LGD4033 ivame ukubizwa ngeLigandrol noma i-LGD futhi yasungulwa yiLigand Pharma. I-Ligandrol ingeyomndeni wama-Modulators akhethiwe we-Androgen Receptor (SARMs). Ukuze siqonde ngokugcwele ukuthi yi-LGD4033, sidinga ukwazi ukuthi i-SARM ingubani. Iyaziwa kakhulu ngenxa yezakhiwo zayo ezikhulayo ze-muscle ezingenayo imiphumela emibi ye-steroidal. Lokhu kuyingxenye yalokho okwenza kube yithandwa kakhulu ngabazimba bomzimba nabagijimi.
I-LGD4033 powder emifushane (1165910-22-4) Indlela Yokusebenza
I-Anabolicum yenza okuningi njenge-anabolic steroid-based substance ngoba inamandla okukhulisa ngokushesha ukwakheka kwe-muscle mass ngenkathi kunciphisa wonke amanoni omzimba.
Imbonini yezokwelapha ibhekisela ku-LGD4033 njenge-SARM noma "i-module etrogen receptor modulator." I-LGD4033 ixhuma ngokwezifiso ze-androgenic ezikhethiwe ezitholakala emathisini ethambo namasipha, okuvumela ukuba kugweme ukuxhumana nezicubu zezingxenye ezinkulu zomzimba ezinjengenhliziyo, i-colon, i-prostate ne-sebaceous glands.
Ngenxa yalokho, le SARM ayifuni nanoma yimiphi imiphumela emibi kakhulu ehlotshaniswa ne-steroids ejwayele ukuhambisana nalezi zici ezinkulu ngokusebenzisa izicubu. Ukuthatha i-LGD4033 kufana kakhulu nokuhamba ngebhayisikili nge-Test-E okokuqala, futhi lokhu kwenza kube lula ngomzimba we-recomp. Kuyinto ebaluleke kunazo zonke ozothola ku-testosterone ngaphandle kokubhekana nemiphumela emibi kakhulu.
Kumele uqaphele lapha ukuthi ukuthatha i-Ligandrol ngenkathi kudla ukudla kwekhalori kanye nomjikelezo we-D-bol kungabangela ukugcinwa kwamanzi kancane, kodwa ayikho into ongayikuphila ngayo. Ngaphezu kwalokho, imiphumela iyashesha ukwehlisa.
Izinzuzo we-LGD4033 powder ephezulu (1165910-22-4)
◆ Amandla: i-LGD4033 inhle ngokuphula ngokusebenzisa ipulazi. Ngokusho iningi labasebenzisi, le SARM ingakhuphula amandla enhliziyo futhi iphakamise ngamasonto amathathu nje.
◆ Ukulahleka Kwemvelo: I-LGD4033 isiza ngokwemvelo ukwakha ubukhulu bemisipha ngokulwa nokuhlukunyezwa kwemisipha esikhundleni sokubhamulela ukusetshenziswa kwama cell fat fat. Ngenxa yokuthi izicubu ze-muscle zinzima ukulondoloza kunamafutha, kungcono ukuthi umzimba uqale ukushisa amafutha ukuze uqhubeke usebenza.
◆ Ukuzwa Okukhulu: Enye yezinzuzo ezinkulu ze-LGD4033 ukuthi ikunika amathani wamandla nokujabula usuku lonke. Ngeke udingeke uhambe phakathi kokuphakama nokuhlaselwa okuhlobene nezinye izidakamizwa, kodwa uzohlala unomuzwa omuhle usuku lonke.
◆ Amapompo: Ungakwazi ukugcina imisipha ekhudlwana, egcwele futhi enezinyosi isikhathi eside uma ujikeleza ne-LGD4033. Le miphumela iyafana nalokho ongase uhlangabezane nakho uma ufanele ujikeleze no-Dianabol noma u-Anavar, bobabili abaziwa kakhulu, ama-SARM anamandla.
I-Raw LGD4033 ephakanyisiwe ephakanyisiwe (1165910-22-4) Isilinganiso
Ukuphila kwengxenye ye-LGD4033 cishe ngamahora angu-30. Ngakho-ke kuphephile ukuyithatha kanye ngosuku ngosuku kumasenti we-10mg kuya ku-22mg futhi usathola imiphumela engcono kakhulu kuyo.
Leli qembu livame ukusetshenziswa emgodini we-SARMs. Uzobona ukuthi ihlanganiswe ne-GW-50156 ne-MK-2866 ukuze ukwandise imiphumela yakho. Ukuthola okuningi kwe-LGD4033, yijikeleze ngamaviki e-8. Qinisekisa ukuthatha isikhathi esiningi ukuze usize ukugcina amazinga akho e-testosterone ahlelekile kahle.
Uma ufuna iseluleko sami, ngizohamba nomthamo we-Ligandrol we-5 kuya ku-10mg ngosuku. Ubude bomjikelezo kufanele bube yikuphi kusuka ku-6 kuya kumaviki angu-10. Yilokho abasebenzisi abaningi abonakala behamba nabo.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo we-LGD4033 powder ephezulu (1165910-22-4)
Idatha yocwaningo lwamanje ku-LGD4033 isitshela ukuthi i-SARM ayinayo imiphumela ehambisana nayo. Lokhu kungenzeka ngokuyinhloko ngoba uLigandrol ayinalo uhlobo lwe-estrogenic. Ukudla okunjalo ngeke kubangele noma yiziphi izinkinga zezempilo ezivamile nama-SARM, njengezinwele zokulahleka, izinyosi, ukubhubhisa, ubuthi obunobindi, ukugcinwa kwamanzi, ukucindezelwa kwegazi eliphezulu, izinkinga zesifo sofuba, nesifo senhliziyo.
Kodwa-ke, inomthelela wokunciphisa i-prostate kodwa lokhu kwenzeka kuphela uma uwuthatha ngokungalingani kahle. Uma kungenjalo, amazinga wakho we-testosterone kufanele ahlale evamile kulo lonke. Ngisho noma amazinga wakho we-testosterone aphelile, azobuya ngokuzenzakalelayo kumaviki ajwayelekile we-3 ngemuva kokuyeka ukuthatha i-SARM.
Qiniseka ukuthi uhlola ividiyo elandelayo nguRyan Russo. Uyokhipha ulwazi oluthe xaxa mayelana nale SARM nokuthi yini ongayilindela.
I-MK-2866 powder emifushane (841205-47-8)
I-MK-2866 powder, evame ukubizwa ngokuthi i-MK-2866, i-Ostamuscle noma i-Enobosarm, ingenye ye-anabolic ephephile futhi ephumelelayo kakhulu ....